Trump oo la filayo in uu UK booqdo sannadka cusub - BBC News Somali
Image caption Woody Johnson
Safiirka Maraykanka u fadhiya Britain ayaa sheegay in uu filayo in Donald Trump uu soo booqan doono UK sannadka cusub, inkastoo ay dhawaan soo foodsaartay labada dhinac ismaan dhaaf dhanka Twitter-ka ah.
Woody Johnson ayaa BBC Radio 4 u sheegay "in ay u badan tahay in kala aragti duwanaantaas si xun loo fasiray".
May ayaa sheegtay in Trump uu ku "khaldanaa" in uu dadka la sii wadaago muuqaal ay baahiyeen koox reer Britain ah oo ay siyaasaddoodu midig fog tahay, taas oo horseeday in aad loogu dhaliilo madaxweynaha Maraykanka.
Johnson ayaa sheegay in xiriirka uu Trump la leeyahay Britain uu wali "aad u wanaagsan yahay".
Wuxuu sheegay in Trump uusan wali dajinin wakhti go'an oo uu booqashadaas billaabi doono, taas oo horseedi doonta in boqoraddu ay ku qaabisho Buckingham Palace ama Windsor Castle.
May: Trump wuu ku khaldanaa sii faafinta muuqaallada Islaam naceybka
Theresa May oo Ruushka ku eedaysay in uu faragaliyay doorashada
"Xaqiiqadii, waxaan u malaynaa wuu iman doonaa" ayuu safiirku ku yiri barnaamijka Today.
"Si rasmi ah looma shaacinin, laakiin waxaan rajaynayaa in uu sidaas yeeli doono".
Waxaa jiray baaqyo ku aadanaa in la joojiyo booqashadaas ka dib markii uu Trump dib u sii faafiyay muuqaallo Muslimiinta ka dhan ah.
Markii afhayeen u hadlay xafiiska ra'iisulwasaaraha Britain uu sheegay in madaxweyne Trump "uu ku khaldanaa in uu sidaa yeello", Twitter kale ayuu soo dhigay isaga oo sheegay in May ay diiradda saarto "argagixisada kharbudaadda ka wada UK".